Cabsi Soo Wajahday Taageerayasha Ururka ONLF Ee Ku Nool Dalka Kenya oo Cabsi idhaha lasoo baxay (Warbixin) |
Cabsi Soo Wajahday Taageerayasha Ururka ONLF Ee Ku Nool Dalka Kenya oo Cabsi idhaha lasoo baxay (Warbixin)
Kenya (NN) 30/12/2013
Mid kamid ah shabakadaha wararka ee ururka ONLF, Ogaden-on-line, ayaa qoray in sirdoonka Itoobiya, DDSI iyo safaarada Itoobiya ku leedahay Nayroobi ay ku hawlan yihiin sidii bartilmaameed looga dhigan lahaa wax ay shabakadu ugu yeedhya”Somaalida Ogadeniya” ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga iyo caasimada Kiiniya ee Nayroobi.
Shabakada ayaa ku andacootay in sirdoonka Itoobiya urursadaan macluumad la xidhiidha qurba-joogta sida magaacdooda, talafoonada, sawiradooda, taariikhdooda iyo waxyaabo kale.
Shabakada ayaa xustay in madaxda xeryaha qaxootiga loo soo diro fariimo dhanka taleefanka ah oo hanjaabad ah iyada oo la farayo in ay raacan nidaamka ka jira Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Garabka diiday nabada ee ONLF ayaa si fagaare ah oga ololeeya dalka kiiniya, gaar haan qaar kamid ah xeryaha qaxootiga. Waxaa intaa dheer, in qaar kamid ah masuuliyiinta garbkaasi gabaad ka dhigtaan dalka kiiniya.
Warbixinta shabakada Ogadenonline, hadii ay run noqoto, ayaa muujinysa cabsida taageerayasha ONLF iyo xubnhooda ee ku sugan kiiniya.
Ururka ONLF oo masuuliyiin kamid ahi heshiis nabadeed la galeen Itoobiya, ayaa waxaa soo foodsaartay qaybsanaan iyo awoodyari dhanka ciidamada ah kadib markii maamulka kiliku abuuray ciidamo gaar ah oo la dagaalama ONLF-ta.
Warbixintan ayaa si gaar ah farta ugu fiiqday sirdoonka Itoobiya ee fadhigoodu yahay Mooyaale, shaqaalaha safaarda Nayroobi ee Itoobiya iyo Madaxada DDSI. Waxa ay warbixintu tilmaanatay in talafoonada hanjabadaha laga soo diaray safaarda Itoobiya iyo jigjjiga.
dalka Kiiniya ayaa ahaa xudanta wadahadalo aan xal keenin oo la doonayey in la isugu soo dhaweeyo garabka nabada diiday ee ONLF iyo xukuumada Itoobiya.
Warka lagu faafiyey ogadenonline ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay wali kudaba jiraan helida magaacda dadka ay adeegsadeen sirdoonka Itoobiya si talaabo looga qaado.
Wadamada Kiiniya iyo Itoobiya ayaa leh iskaashi dhanka amaank ah iyaga oo si wadajir ah u wadaaga macaluumadka la xidhiidha uruarada argagixisada ah iyo dhaqdhaqaaqa kooxha mucaaradka ah.